UNHCR oo diiday waalidka Rahaf al-Qanun in ay la kulmaan gabadhooda baxsadka ah… – Hagaag.com
UNHCR oo diiday waalidka Rahaf al-Qanun in ay la kulmaan gabadhooda baxsadka ah…
Posted on 9 Janaayo 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Madaxa xafiiska socdaalka ee Thailand ayaa shaaca ka qaaday in UNHCR aanan u ogolaan doonin aabaha dhalay Rahaf iyo walaalkeeda in ay la kulmaan inta ay booqashada ku joogaan dalka Thailand.
Warka mas’uulka socdaalka Thailand ayaa lagu sheegay in ay la wadaageen UNHCR in ayna u ogolaaneyn waalidka iyo walaalka Rahaf in ay la kulmaan gabadhooda, inkastoo ehelka Rahaf ay la kulmeen UNHCR iyo sii hayaha safaarada Sacuudiga ee Bangkok hadana waxaa la sheegay in ay wadanka ka bixi doonaan maalinta Arbacada ah.
Arrinta Rahaf ee qaxootinimo ayaa loo gudbiyey mas’uuliyiinta Australia in ay baaraan ogolaanshaha dalabkeeda qaxootnimo, dhanka kale UNHCR ayaa bayaan ku sheegtay in ay ka heshay wasaarada arrimaha dibada ee Australia in uu socdo howlaha daraasada dalabkeeda qaxootinimo.
Safaarada Sacuudiga ee Bangkok ayaa carabka ku dhuujisay maalintii Talaadada in ayna ka qaadin baasaboorka gabadha, waxay kaloo tilmaantay in Riyadh aanu weydiisan in loo tarxiilo dalkeeda, waxay adkeysay in arrintani ay tahy mid ka dhaxeysa qoys, laakin ay imaaneysa ka warqabka iyo xiriirinta safaarada.
Horey ayaa safaarada Sacuudiga ee Bangkok Axadii u sheegtay in Thailand ay Rahaf ku celin doonaan dalka Kuwait oo qoyskeeda ku noolaa, maadaama ayna heysan ticket ay ku noqoneyso ama barnaamij dalxiis, waxay safaaradu ku dartay in aan awood u laheyn in ay ku xayirto garoonka, waxay kaloo sheegeen in ayna ka qaadin baasaboorkeeda.